Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း)
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) ကဘာလဲ။
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းသည် နှလုံးမှသွေးများကို ခန္ဓါကိုယ်အောက်ပိုင်းရှိ တစ်ရှူးများအင်္ဂါများသို့ သယ်ဆောင်ပေးသောအဓိကသွေးလွှတ်ကြောဖေါင်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မသွေးလွှတ်ကြောမသည် ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးသွေးလွှတ်ကြော ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မသွေးကြောဖေါင်းခြင်းဆန့်ကားခြင်းသည် အန္တရာယ်များပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လျင်မြန်စွာမကုသပါကသွေးလွှတ်ကြောနံရံသည် အားပျော့လာပြီးပေါက်ကာသွေးထွက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းသည် အဖြစ်များသောရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဆိုအရဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းသည် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင်ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၆၀ ကျော်သူများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းသည် ဖြည်းညင်းစွာ ဖြစ်ပွားပြီးများသောအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြတက်ပါ။ သို့သော်လည်းရောဂါကူးစက်ခံရသောအချို့ကိစ္စများတွင် ဝမ်းဗိုက်နာခြင်းကျောနာခြင်းတို့ဖြစ်တက်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြမထားသောအခြားလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေသည်ဟုစိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အသက် ၅၅နှစ်ကျော်သောအမျိုးသားများသို့မဟုတ် အသက် ၆၀ကျော်သော အမျိုးသမီးများတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုရှိပါက။
ပြင်းထန်စွာဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ မူးဝေခြင်း နှင့် နွမ်းလျခြင်းစသောရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက။
မိသားစုဝင်များတွင် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းရှိဖူးပါကသင့်တွင် ထိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သိသာသောလက္ခဏာများပေါ်ရန် ခဲယဉ်းသောကြောင့် ဆရာဝန် နှင့် ပြသပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပါ။ သို့သော် ဖြစ်စေခြင်းကိုအကူအညီပေးသောအချက်များရှိပါသည်။ အချက်အချို့မှာ –
သွေးကြောများမာလာခြင်း (သွေးတွင်းအဆီများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီးအဓိကအန္တရာယ်များစေသောအချက်ဖြစ်သည်)
ဆေးရွက်ကြီးလိပ် အသုံးပြုမှု – ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကို မြန်စွာ ဖြစ်ပွားစေပြီးသွေးတိုးခြင်းနှင့် သွေးကြောများမာလာခြင်းတို့ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
သွေးကြောမတွင်ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း – ရှားပါးသော်လည်းသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်သောတစ်ရှူးများကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း (Ehlers-Danlos syndrome)
ငါ့ဆီမှာ Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်-
အသက် ၅၀-၆၅ နှစ်ရှိသောလူများ
အဆီနှင့် အခြားသွေးကြောများကိုထိခိုက်စေနိုင်သောပစ္စည်းများစုပြုံခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆွေမျိုးထဲတွင် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်း ဖြစ်သူများရှိခြင်း။ လေ့လာမှုများအရလူနာများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းဖြစ်သောဆွေမျိုးများရှိပါသည်။
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရအမျိုးသားများတွင် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းသည် အမျိုးသမီးများထက် ၆ဆ ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကိုပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အတွင်းရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် ဝမ်းဗိုက်အလယ်တွင် ဖောင်းနေသောအတုံးအခဲတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ထိတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းဟုသံသယရှိပါက ultrasound နှင့် CT scan ရိုက်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Ultrasound သည် သွေးကြောဖောင်းခြင်း၏ တည်နေရာနှင့် အတိုင်းအတာကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင် ပါသည်။ သို့သော် ဆရာဝန်များသည် ဖောင်းခြင်း၏ တိကျသောပမာဏကိုသိရန် CT scan ကိုသာသုံးကြပါသည်။
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အချိန်မီရောဂါအဖြေရှာတွေ့ပါကဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကိုကုသနိုင်ပါသည်။ ဖေါင်းနေသောသွေးလွှတ်ကြောမပေါက်သွားပါကနောက်ထပ်ဆိုးကျိုးများမဖြစ်အောင် ကုသမှု တိုက်ရိုက် ခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကုသမှုနည်းလမ်းများသည် သွေးကြောဖောင်းခြင်း၏ အရွယ်အစား နှင့် ပေါက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါသည်။
ကုသမှုသည် သွေးကြောဖောင်းခြင်း၏ အရွယ်အစား နှင့် ပေါက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ပေါ်မူတည် ပါသည်။ သွေးကြောဖေါင်းခြင်းသည် သေးငယ်ပါက ( ၄စင်တီမီတာ အောက်) ကုသမှုခံယူရန် မလိုပါ။ သို့သော် ၆လမှ ၁နှစ်အထိပုံမှန် ဆေစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သွေးကြောဖေါင်းခြင်းသည် ကြီးလာသလားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် sonograms များအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
သွေးကြောဖောင်းခြင်းသည် ၄-၅စင်တီမီတာ ရှိပါကကုသမှုများခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ စစ်ဆေးမှုများလိုအပ်ပါသည်။ သွေးကြောဖေါင်းခြင်းသည် တစ်နှစ်လျှင် တစ်စင်တီမီတာကျော် ကြီးထွားလာပါကခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည်သာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၅စင်တီမီတာ ထက်ကြီးသောသွေးကြောဖေါင်းခြင်းကိုခွဲစိတ်ကုသသင့်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းတွင် သွေးကြောမထဲသို့ ပြုလုပ်ထားသောကွန်ရက်ပြွန်ထည့်ခြင်းပါဝင်ပါသည်။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းပင်မသွေးလွှတ်ကြောဖောင်းလာခြင်းကိုသက်သာစေပြီးသင့်သွေးကြောများကိုကျန်းမာစေပါသည်။
အစားအစာထဲတွင် ကိုလက်စထောဓါတ်နှင့် အဆီကိုလျော့ပါ။
အကယ်၍သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိပါကသင့်အတွက်သင့်တော်သောအဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန် နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print. Page 428
Aortic aneurysms. The Society of Thoracic Surgeons. http://www.sts.org/patient-information/aneurysm-surgery/aortic- aneurysms. Accessed Jan 01, 2016.
Screening for abdominal aortic aneurysm. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsaneu.htm. Accessed Jan 01,2016.
Lewiss RE, et al. Vascular abdominal emergencies. Emergency Medicine Clinics of North America. http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/aaa_irr_lectio_magistralis_2013.pdf. Accessed Jan 01, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print.